အကောင်းဆုံး 10-in-2 shampoo နှင့် conditioner ၁၀ မျိုး
[ad_1] သင်ဟာမနက်ခင်းမှာအမြဲပြေးလွှားနေတဲ့သူတစ်ယောက်လား။ ဆံပင်လျှော်ပြီးတဲ့အခါ Conditioner စုပ်ဖို့စောင့်ရတာမကြိုက်ဘူးလား။ ဒါဆိုရင်မင်းအတွက်ကံကောင်းတာတစ်ခုကမင်းရဲ့ဆံပင်ကိုတစ်ပြိုင်နက်သန့်စင်ပြီးဆံပင်ကိုသန့်ရှင်းပေးမယ့် hair care products တွေအများကြီးရှိတယ်။ မင်း… စာဖတ်ခြင်း Continue အကောင်းဆုံး 10-in-2 shampoo နှင့် conditioner ၁၀ မျိုး
Published 15 စက်တင်ဘာလ 2021
သီချင်းဆိုပြီးနောက်တိတ်ဆိတ်စွာပြန်လာခဲ့သောကြယ် ၁၀ ပွင့်အလှများ
[ad_1] NSW Curly Sue ၏အောင်မြင်မှုအပြီး Alison Porter သည် screen များမှဘာကြောင့်ပျောက်သွားတာလဲ၊ Svetlana Loboda သည် VIA GRA အဖွဲ့မှထွက်ခွာသောအခါဘာလုပ်ခဲ့သနည်း၊ Andie MacDowell သည်မင်းသမီးမှမော်ဒယ်အဖြစ်သို့ပြန်လည်လေ့ကျင့်ရန်မည်သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သနည်း။ သီချင်းခွေတစ်ခွက်ရယ်ပြီးနောက်ကျော်ကြားမှုပြန်ရလာသောကြယ် ၁၀ ပွင့်အလှများ Svetlana Loboda“ လူတွေအားလုံး… စာဖတ်ခြင်း Continue သီချင်းဆိုပြီးနောက်တိတ်ဆိတ်စွာပြန်လာခဲ့သောကြယ် ၁၀ ပွင့်အလှများ
Published 10 စက်တင်ဘာလ 2021
မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာရည် ၅ မျိုးငါထပ်ဝယ်မယ်
[ad_1] ဒီထုတ်ကုန်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါနေ့စဉ်ဘ ၀ မှာအခြေခံအကြောင်းမတွေးတော့ဘူး၊ မနက်ခင်းမှာအဆီပြန်တဲ့အသားအရေမပါတဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ night care ကိုကောက်ယူခဲ့တယ်၊ အရေခွံချွတ်တာကိုမေ့သွားပြီးငါ့ရဲ့နေ့စဉ်အလှအပရေးရာကိုတတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့ကုသမှုကမျက်နှာမှာ serum တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျန်တာအားလုံးနောက်ကလိုက်လိမ့်မယ်။ အရာအားလုံး… စာဖတ်ခြင်း Continue မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာရည် ၅ မျိုးငါထပ်ဝယ်မယ်
[ad_1] BAchromin အမှတ်တံဆိပ်သည်အသားအရေကြည်လင်မှုပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားဖူးသူတိုင်းနှင့်ရင်းနှီးသည်။ မင်းသူ့အကြောင်းရုတ်တရက်မကြားဖူးဘူးဆိုရင်မင်းအမေကိုသေချာမေးပါ။ USSR တွင်အမျိုးသမီးများသုံးသောအသက်အရွယ်အစက်များအတွက်တစ်ခုတည်းသောခရင်မ်ကို Bulgarian မှထုတ်လုပ်သည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ငါတို့အမေတွေရဲ့ခရင်မ်ကအခုဘယ်လိုပုံစံလဲ။
ငါတို့ရဲ့အလှဆုံးအမျိုးသမီးအားကစားသမား ၃၅ ယောက်
[ad_1] HFamous gymnasts များသည်သူတို့၏အားကစားဘ ၀ ပြီးဆုံးပြီးနောက်ရုရှားတွင်အလှဆုံးဘောလုံးကစားသမားနှင့်မည်သို့တူသနည်း။ အားကစား၌လှပသောမိန်းကလေးများအကြောင်းဆောင်းပါး၏နောက်ဆုံးအပိုင်း ပထမနှင့်ဒုတိယအပိုင်းများကို link များပေါ်တွင်ဖတ်ပါ။ Margarita Mamun Margarita Mamun သည်ခုနစ်ကြိမ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့သည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ငါတို့ရဲ့အလှဆုံးအမျိုးသမီးအားကစားသမား ၃၅ ယောက်
ဆံပင်ထုတ်ကုန် ၅ မျိုးကိုငါထပ်ခါထပ်ခါ ၀ ယ်သည်
[ad_1] ခေါင်းလျှော်ရည်၊ တောက်ပစေသောပုံစံဖြန်းဆေး၊ အမြစ်မှထုတ်သော mousse နှင့်ငါနောက်ဆုံးသုံးထားသောအခြားထုတ်ကုန်များနှင့်အတူ Sofia Vorobyova BeautyHack Editor Shampoo သည်ဆံပင်အားပမာဏတိုးစေရန် Extra Volume Shampoo နှင့် smoothing conditioner Smoothing Conditioner, Moroccanoil အစ္စရေးအမှတ်တံဆိပ် Moroccanoil သည်ကျွန်ုပ်၏ဆံပင်များကိုခြောက်သွေ့မှုနှင့်မှိုင်းမှိုင်းမှုများကိုသုံးနှစ်ခန့်သက်သာစေသည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ဆံပင်ထုတ်ကုန် ၅ မျိုးကိုငါထပ်ခါထပ်ခါ ၀ ယ်သည်
[ad_1] အဖြူရောင်လက်သည်းဆိုးဆေးလက်သည်းနီစိတ်ကူး ၄၀ ။ [ad_40]
Angelina Jolie ရဲ့အလှဆုံးအခန်းကဏ္ 8 ၈ ချက်
[ad_1] V သူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအစတွင် Black tea ဝတ်စုံအစားအနီရောင်ကော်ဇောပေါ်တွင်သားရေဘောင်းဘီကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်များတွင်ပါ ၀ င်သောသရုပ်ဆောင်များသည်သင့်လျော်သည်။ Gia သည်မတည်ငြိမ်သောစိတ်ဓာတ်နှင့်ဖက်ရှင်ကျသော Lara Croft၊ ကလေး Kate စာဖတ်ခြင်း Continue Angelina Jolie ရဲ့အလှဆုံးအခန်းကဏ္ 8 ၈ ချက်
သင့်လက်သည်းကိုရှည်စေသော manicure ရွေးချယ်မှု ၂၀
[ad_1] သင်၏လက်သည်းကိုရှည်စေသောလက်သည်းရွေးချယ်မှု ၂၀
Elizabeth II အကြောင်းသင်မသိခဲ့တဲ့အချက် ၁၀ ချက်
[ad_1] TOQueen ဗြိတိန်ဘုရင်မင်းမြတ်သည်သက်ရှိတို့တွင်သက်တော်အရှည်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်လသည်သူမ၏နန်းတက်ပွဲ ၆၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်သည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်း Elizabeth II သည်စာလုံး ၃.၅ သန်းကိုဖြေနိုင်ခဲ့သည်၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးခုနစ်ပါးကိုသိရန်နှင့် ဦး ထုပ် ၅၀၀၀ စုဆောင်းခြင်းတို့ကိုစုစည်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဘုရင်မနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်များမှာ ... စာဖတ်ခြင်း Continue Elizabeth II အကြောင်းသင်မသိခဲ့တဲ့အချက် ၁၀ ချက်
မျက်မှန်တပ်ထားသောကြယ် ၂၀ ။ သင်မသိပါ
[ad_1] D ကော်ဇောနီအတွက်သူတို့ကမျက်ကပ်မှန်ကိုရွေးကြပြီးရိုက်ကူးရေးနှင့်လူမှုရေးပွဲများမှအားလပ်ချိန်များတွင်ဆေးစာပါမျက်မှန်များကိုဂုဏ်ယူစွာဝတ်ဆင်ကြသည်။ BeautyHack ၏အထူးရွေးချယ်မှုတွင် "မျက်စိလေးလုံး" ဟုတံဆိပ်တပ်ခံရမည့်မကြောက်သောကြယ်များရှိသည်။ ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ၊ နာမည်ကျော်များစွာမပါလျှင်စာရင်းသည် ပို၍ ရည်မှန်းချက်ကြီးလိမ့်မည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue မျက်မှန်တပ်ထားသောကြယ် ၂၀ ။ သင်မသိပါ
ရပ်! အသက်အရွယ်အားဖြင့်ဆိုးရွားလွန်းသောဆံပင်ပုံစံ ၈ မျိုး
[ad_1] ရပ်လိုက်ပါ။ အသက်အရွယ်ရင့်ကျက်လွန်းသောဆံပင်ပုံစံ ၈ မျိုး [ad_8]
ကြည့်ရှုသူနှင့် ပတ်သက်၍ စံချိန်ချိုးထားသောဘရာဇီးတီဗီရှိုး ၁၅ ခု
[ad_1]“ Izaura ၏ကျေးကျွန်များ” မှ“ ဘရာဇီးအလားအလာ” သို့ BeautyHack တွင်ရုရှား၌ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော ၃၆ နှစ်တာအကောင်းဆုံးဘရာဇီးတီဗီစီးရီးဖြစ်သည်။ “ Slave Izaura” ဇာတ်လမ်းတွဲသည် ၁၉၇၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင်ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး USSR တွင်“ Slave Izaura” ကို ၁၉၈၈ တွင်သာပြသခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဆိုဗီယက်ရုပ်မြင်သံကြားတွင်ပထမဆုံးသောဆပ်ပြာအော်ပရေတာဖြစ်ခဲ့သည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ကြည့်ရှုသူနှင့် ပတ်သက်၍ စံချိန်ချိုးထားသောဘရာဇီးတီဗီရှိုး ၁၅ ခု
[ad_1] BeautyHack သည်ပါးလွှာသောဆံပင်များကိုသဘာဝအတိုင်းဆက်ခံသောအောင်မြင်ကျော်ကြားသောဆံပင်ပုံစံများကိုစုစည်းထားသည်။ stylists များနှင့် trichologists များသည်ဆံပင်အားမည်သို့ဂရုစိုက်ပုံနှင့်စတိုင်လ်ကျရန်မည်သို့ဆိုလိုသည်ကိုပြောခဲ့သည်။ Nikolskaya Club အလှပြင်ဆိုင် Salty Dog Cocktail Beach Spray ၏ Vyacheslav Gordeev ထိပ်တန်း stylist, Evo သည်ကျွန်ုပ်အားပါးလွှာသောဆံပင်များကိုတောက်ပြောင်စေသည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ဆံသားကောင်းများအတွက်ခေတ်စားသောဆံပင်ပုံစံ ၂၀
BeautyHack စာဖတ်သူများအဆိုအရအကောင်းဆုံးမျက်နှာအမှုန့် ၅ မျိုး
[ad_1] BeautyHack စာဖတ်သူများနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးသောရူဘယ် ၇၉၉ မှ ၄၀၀၀ ရန်ပုံငွေများနှင့် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအမှုန့် Prisme Visage, Givenchy Natalia Mikhalyuk-Nehme လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာက Prisme Visage ထုပ်ပိုးမှုအပြောင်းအလဲများနှင့်အမှုန့်သည်မိန်းကလေးများစွာ၏အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ အလှကုန်အလှကုန်လောကမှာဒီအရောင်းရဆုံးရောင်း ၀ ယ်သူရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့စပါမယ်။ စာဖတ်ခြင်း Continue BeautyHack စာဖတ်သူများအဆိုအရအကောင်းဆုံးမျက်နှာအမှုန့် ၅ မျိုး
ရင်သားရှေ့သို့: မအောင်မြင်သော Mammoplasty ဖြင့်ကြယ် ၈ ပွင့်
[ad_1] ရင်သားရှေ့ခရီး - မအောင်မြင်သောအသားတုခွဲစိတ်မှု ၈ ကြယ် [ad_8]
[ad_1] ကော်ဇောနီခင်းမှစိတ်ကူး ၁၅ ချက်သည်လက်တွေ့ဘဝနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ မိတ်ကပ်ပညာရှင်အကြံပေးချက်များပါ ၀ င်သည်။ Hailey ကဲ့သို့ Hayley Bieber Luminous မိတ်ကပ်သည်ချက်ချင်းလန်းဆန်းစေသည်၊ ၎င်းသည်အပြင်းထန်ဆုံးစီးပွားရေးတနင်္လာနေ့များအတွက်ပြီးပြည့်စုံစေသည်။ မိတ်ကပ်ပညာရှင် Ksenia Nikitina သည် Urban Decay base ကိုအရိပ်အောက်တွင်လိမ်းရန်အကြံပေးသည်။ “ သူတို့ကအရိပ်ကို ၂၄ နာရီလုံလုံခြုံခြုံထားကြတယ်။ satin ရွေးတယ် ... စာဖတ်ခြင်း Continue ကြယ်များမှအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု ၂၀
Roman Moiseenko - သင်ပြုလုပ်သောပုံစံအမှားခြောက်မျိုးအကြောင်း
[ad_1] ROman Moiseenko သည်ရုရှား၌အကျော်ကြားဆုံးဆံပင်ညှပ်ဆရာနှင့်စတိုင်လ်ဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်“ Star Factory”,“ People's Artist”, ကဲ့သို့သောကြီးမားသောပရောဂျက်များတွင် STS တွင်“ Take It Off ทันที” အစီအစဉ်ကိုပူးတွဲကျင်းပခဲ့သည်။ ရောမကမင်းဆံပင်ကိုဘယ်လိုစနစ်တကျအခြောက်ခံရမယ်၊ ဘာကြောင့်ခွဲလိုက်လဲ၊ ဘာကိုပြောင်းဖို့လိုလဲပြောခဲ့တယ်။ စာဖတ်ခြင်း Continue Roman Moiseenko - သင်ပြုလုပ်သောပုံစံအမှားခြောက်မျိုးအကြောင်း
[ad_1] BeautyHack ပရောဂျက်၏သူရဲကောင်း Katya သည် Patriarch's Ponds ရှိ Salon Art'Up ၌နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်ဆံပင်ညှပ်အသစ်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောသူမ၏ခံစားချက်နှင့်မိတ်ကပ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ Stylist Eldar Adraev နဲ့ Art'Up မိတ်ကပ်ပညာရှင် Alena Lapina တို့ကသူတို့ရဲ့စမ်းသပ်ချက်အကြောင်းပြောကြသည်။ Art'Up အလှအပ၏ Eldar Adraev မတိုင်မီ ... စာဖတ်ခြင်း Continue Art'Up အလှပြင်ဆိုင်မှာငါဆံပင်ညှပ်တာနဲ့မိတ်ကပ်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲ
ဒီတပတ် BeautyHack ရဲ့အကြံပေးချက် - ဆားနဲ့ရေချိုးပါ
[ad_1] HD (အထူးသဖြင့်မြို့ကြီးများတွင်နေထိုင်သူများအတွက်) ဤကဲ့သို့သောဆန္ဒအတွက်အချိန်မနှမြောပါနှင့်။ သင်အအေးမိခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများကြောင့်အရေပြားခြောက်သွေ့ပြီးမွဲခြောက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းတို့တွင်အလုပ်များ။ ရေချိုးခြင်းနှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးဆားကိုသုံးပါ။ BeautyHack မှကျွမ်းကျင်သူများမှသက်သေပြချက်ရွေးချယ်မှု ၆ ခု။ ပထမ၊ … စာဖတ်ခြင်း Continue ဒီတပတ် BeautyHack ရဲ့အကြံပေးချက် - ဆားနဲ့ရေချိုးပါ
[ad_1] GBeautyHack Master Editor Karina Andreeva သည်အလှပြင်ဆိုင်“ Millefeuille” သို့ Frunzenskaya တွင် သွား၍ Italian Icoon Laser စက်ပစ္စည်းတွင်ကိုယ်ခန္ဓာဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆယ်ခုကိုစမ်းသပ်ပြီးသူမ၏အထင်အမြင်ကိုဝေမျှခဲ့သည်။ ငါဒီနေ့အမျိုးသမီးတိုင်းလိုလိုတိုတောင်းတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ကျန်းမာတဲ့အသားအရေကိုမက်တယ်လို့ပြောရင်ငါလိမ်မှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ကံကောင်းသည်။ ... စာဖတ်ခြင်း Continue နာကျင်မှုမရှိသောခန္ဓာကိုယ်ပုံသွင်းနည်းကိုစမ်းသပ်မောင်းနှင်သည်
ချက်ချင်းကြီးထွားပါ။ ဆံပင်မပါသည့်ကြယ် ၁၀ လုံး
[ad_1] Ha tree သည်ပျင်းရိသောဆံပင်ပုံစံကိုမွမ်းမံရုံတင်မကဘဲမျက်နှာအချိုးအစားကိုပါပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပထမကိစ္စတွင်ရှုံးနိမ့်ရန်အခွင့်အလမ်းအနည်းငယ်သာရှိလျှင်ဒုတိယ၌အရာအားလုံးကပိုရှုပ်ထွေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဖြောင့်သောဆံပင်ပုံစံသည်လေးထောင့်ပုံသဏ္ာန်ရှိသောအမျိုးသမီးများနှင့်မသင့်တော်ပါ၊ ဆံပင်တိုသည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ချက်ချင်းကြီးထွားပါ။ ဆံပင်မပါသည့်ကြယ် ၁၀ လုံး
၃၃ မတိုင်မီဆုံးဖြတ်ရန်ခေတ်စားနေသောဆံပင်ပုံစံ ၃၃
[ad_1] ဆံပင်ညှပ်ခြင်း၊ ဆံပင်ညှပ်ခြင်း၊ ဆံပင်ညှပ်ခြင်း၊ လက်ဝှေ့ကျစ်ဆံမြီးနှင့် ponytails တိုတောင်းစေသောအရာများ - သင်မစမ်းရသေးတာဘာရှိလဲ။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရမည့်နေရာ - HAIRDRYER Dry Bar (Bolshaya Dmitrovka၊ ၁၆/၁၊ လိပ်စာအားလုံးကိုဤနေရာတွင်ကြည့်နိုင်သည်) တပ်ဆင်မှုနှုန်း ၁ ရူဘယ် ၄၀၀ (ယက်လုပ်ခြင်း)၊ ရူဘယ် ၂၀၀၀ (နေ့စဉ်) ရူဘယ် ၃၅၀၀ (“ တမ်းချင်း ၀ ီကီ”) ။ Brow & Beauty Bar (Bolshaya Dmitrovka၊ ၁၆ နှစ်၊ Malaya Bronnaya၊ … စာဖတ်ခြင်း Continue ၃၃ မတိုင်မီဆုံးဖြတ်ရန်ခေတ်စားနေသောဆံပင်ပုံစံ ၃၃
[ad_1] Hit သည် Rebel Spirit မှ Luisana Lopilato ထံမှဖြစ်ပြီး Claire Danes သည် Jared Leto နှင့်အတူမည်သည့် TV စီးရီးတွင်ပါဝင်သနည်း။ BeautyHack သည် ၉၀ နှင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်များကျော်ကြားသောဆယ်ကျော်သက်များယခုဘာလုပ်နေသည်ကိုဖော်ပြသည်။ Mischa Barton (တီဗီစီးရီး“ OS - Lonely Hearts” မှ Marissa Cooper) ၏နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတွဲ၏ပထမအပိုင်းကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue မင်းမှတ်မိလား။ ဘာသာရေးတီဗီစီးရီးတွေရဲ့သူရဲကောင်းတွေဘယ်လိုရင့်ကျက်လာသလဲ
ငါထပ်ခါထပ်ခါ ၀ ယ်သောပြီးပြည့်စုံသောအသံထုတ်ကုန် ၆ ခု
[ad_1] R ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်း၊ နီခြင်း၊ မျက်လုံးအောက်ရှိစက်ဝိုင်းများ - အကျွမ်းတဝင်ရှိသောပြသနာများလား။ ပြီးပြည့်စုံသောလေသံကိုဖန်တီးရန်အားထုတ်မှုနှင့်ငွေများစွာလိုအပ်သည်။ “ နောက်ဆုံးထွက်သည်အထိ” တွင်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးများအကြောင်းပြောသည်။ Sofia Vorobyova BeautyHack Editor ၏မျက်နှာပြုပြင်မုန့် CC Red, Erborian မှအစိမ်းရောင်မှအဝါနုရောင်သို့အံ့သြဖွယ်အသွင်ပြောင်းမှုသည် ... စာဖတ်ခြင်း Continue ငါထပ်ခါထပ်ခါ ၀ ယ်သောပြီးပြည့်စုံသောအသံထုတ်ကုန် ၆ ခု
ပြီးပြည့်စုံတဲ့မျက်ခုံးမွှေးနဲ့နာမည်ကြီး ၁၅ ယောက်
[ad_1] NST မျက်ခုံး၏ရွေးချယ်မှုပုံစံသည်ကြည့်ခြင်းသည်ပိုပွင့်လင်းစေရုံသာမကမျက်နှာ၏အချိုးအစားကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးမိတ်ကပ်အနုပညာရှင်များသည်ဖက်ရှင်ကိုလိုက်စားရန်အကြံပေးသည်။ ကျယ်ပြန့်သော၊ ရှုပ်ပွနေသောမျက်ခုံးများသည်ဤကမ္ဘာချီလမ်းလျှောက်ပွဲများကို "ထွက်ခွာသွားခြင်း" မရှိသေးပါ၊ ဤပုံစံ ... စာဖတ်ခြင်း Continue ပြီးပြည့်စုံတဲ့မျက်ခုံးမွှေးနဲ့နာမည်ကြီး ၁၅ ယောက်
သင်သိသင့်သော Angelina Jolie တက်တူး ၁၀ ခု
[ad_1] MHave ကလေးခြောက် ဦး နှင့်ချစ်ကြည်ရေးသံတမန် Angelina Jolie သည်တက်တူးဝါသနာပါသူဖြစ်သည်။ “ သေခြင်း” အတွက် hieroglyph သည်မင်းသမီး၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်ပထမဆုံးပေါ်လာသည်။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် Angie သည်၎င်းကိုဖယ်ရှားပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကာကွယ်မှုအတွက် Tai ဆုတောင်းသည်။ ကြယ်တာရာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ "အနုပညာ" အားလုံးသည် ... စာဖတ်ခြင်း Continue သင်သိသင့်သော Angelina Jolie တက်တူး ၁၀ ခု
[ad_1] V Bella Hadid ကသူမရဲ့ပထမဆုံးခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုကိုဘယ်အသက်အရွယ်မှာရခဲ့သလဲ၊ Kylie Jenner ကသူမရဲ့အသွင်အပြင်အသစ်ကိုဘယ်လိုအခြေအနေပေးခဲ့တာလဲ။ အခန်းကဏ္, သစ်များ၊ စာချုပ်များနှင့်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအတွက်ကြောင့်ကြယ်များသည်အန္တရာယ်မရှိသော Botox ထိုးခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောပလတ်စတစ်ဆာဂျရီခွဲစိတ်မှုတို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ Cher Cher သည်အသက် ၇၂ နှစ်ရှိပြီးယင်းတို့အနက်ထက်ဝက် ... စာဖတ်ခြင်း Continue အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ကြယ်တွေဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ။
[ad_1] Zdid သည်ပုံကိုပြန်လည်ဆန်းသစ်ရန် (သို့) ပုံပြောင်းလိုပါသလား။ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချရန်သင်၏အချိန်ကိုယူပါ - ဆံပင်ပုံစံအပြောင်းအလဲများသည်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အမြဲမကိုက်ညီပါ။ သင့်မှာဆံပင်တိုတိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင်ဒီအရှည်ကမင်းနဲ့သင့်တော်လားဆိုတာကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ပါ။ BeautyHack သည်ဆံပင်တိုခြင်းကိုမကြိုက်သူအကြောင်းဖြစ်သည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ဆံပင်အတိုနဲ့မသွားဘူး
ဝယ်ဖို့မမေ့နဲ့။ ယခုတစ်ပတ်အတွက်ထိပ်တန်းထုတ်ကုန်အသစ် ၁၀ ခု
[ad_1] ဝါသနာရှင်သုံးပရိဘောဂ၊ မျက်နှာအတွက်ပန်းရေ၊ ကွက်များ အရေးအကြောင်းဆန့်ကျင်စေသောအနှိပ်အနှိပ် Remover၊ MIZUHI ထိရောက်၊ ရိုးရှင်း၊ ဘတ်ဂျက် ငါတို့စကားပြောခဲ့တယ်… စာဖတ်ခြင်း Continue ဝယ်ဖို့မမေ့နဲ့။ ယခုတစ်ပတ်အတွက်ထိပ်တန်းထုတ်ကုန်အသစ် ၁၀ ခု
Polina Gagarina နှင့်အခြားရုရှားသရုပ်ဆောင်များသည်ကိုယ်အလေးချိန်အများကြီးကျဆင်းသွားသည်
[ad_1] พอร์ต၊ သင့်တော်သောအာဟာရ (သို့) တင်းကျပ်သောအစားအစာတို့ဖြင့် Polina Gagarina, Svetlana Khodchenkova, Anastasia Denisova နှင့်အခြားကြယ်များအသွင်သဏ္ဌာန်ကိုမည်သို့ကူညီခဲ့သနည်း။ Polina Gagarina သည်“ Star Factory” တွင် Polina သည်သူမယခုကဲ့သို့မဟုတ်တော့ပါ။ ဆိုလိုရင်းမှာထိုအချိန်ကသူမတွင်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနှင့်ပလက်တီနမ်ရွှေရောင်ဆံပင်မရှိခြင်းတို့ကြောင့်မဟုတ်ပါ။ စာဖတ်ခြင်း Continue Polina Gagarina နှင့်အခြားရုရှားသရုပ်ဆောင်များသည်ကိုယ်အလေးချိန်အများကြီးကျဆင်းသွားသည်
trichologist နှင့် stylist တစ် ဦး ထံမှအလှအပ ၁၈ ခု
[ad_1] AND ကျော်ကြားသော trichologist Tamara Berechikidze နှင့် stylist Alexei Nagorskiy သည်သင်၏ဆံပင်ကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ၊ ပါးလွှာပြီးအချိုးအစားမညီသော၊ သဘာဝကျသောဆံပင်ရှည်များ ရှည်လျားသောဆံပင်ထူသော Tamara Berechikidze ဆေးသိပ္ပံ၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၊ အရေပြားအထူးကုဆရာ ၀ န်၊ အလှအပအထူးကုဆရာ ၀ န်၊ ၁) သင်၌ရှည်လျားလေးလံသောဆံပင်ရှိလျှင်သစ်ဆံဖြီးကိုသုံးပါ။ စာဖတ်ခြင်း Continue trichologist နှင့် stylist တစ် ဦး ထံမှအလှအပ ၁၈ ခု
အသားအရေကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ။ Cosmetologist ကအကြံပေးသည်
[ad_1] ရုရှားရှိ DIBI Milano ၏နိုင်ငံတကာအလှကုန်ပညာရှင် TAsya Al-Arabi ကအသားအရည်ကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲ၊ အကာအရံအတားအဆီးကဘာလဲ၊ မုန့်ရဲ့ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ဖို့ဖြစ်နိုင်လားဆိုတာကိုပြောပြသည်။ ရုရှားနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံတကာအဆင့် DIBI Milano မှအလှကုန်ပညာရှင် Asya Al-Arabi Trainer-cosmetologist နှင့်သင့်တော်သောအသားအရေထိန်းသိမ်းမှုအကြောင်းပြောပြပါ။ စာဖတ်ခြင်း Continue အသားအရေကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ။ Cosmetologist ကအကြံပေးသည်
[ad_1] TO နှုတ်ခမ်းနီတွင်ပါ ၀ င်သောအစိတ်အပိုင်းများ၊ ombre အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမည်သို့ပြုလုပ်ပုံ၊ ခဲတံဖြင့်ပုံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဘယ်လိုဆွဲမလဲ။ သင့်နှုတ်ခမ်းကိုပွတ်တိုက်ပြီးနှုတ်ခမ်းနီ Lisa Eldridge ကိုမိတ်ကပ်မလိမ်းခင် lip scrub ကိုသုံးပါ။ Kiko's Scrub & Peel Wipes သည်သေနေသောအမှုန်များကိုဖယ်ရှားရုံသာမက ... စာဖတ်ခြင်း Continue မိတ်ကပ်ဖြင့်နှုတ်ခမ်းကိုချဲ့နည်း။ မိတ်ကပ်အနုပညာရှင်များထံမှအကြံဥာဏ်များ
[ad_1] NSapaya၊ ဖရဲသီး၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ပန်းသီးနှင့်ထောပတ်သီးတို့သည်ကျန်းမာသောဖျော်ရည်နှင့်အသီးသုပ်ပင်များပါ ၀ င်ရန်ချက်ပြုတ်နည်းမဟုတ်သော်လည်းအသားအရေပြန်လည်ကျန်းမာပြီးရေဓာတ်လိုအပ်သောသူများအတွက်တကယ့်အလှအပအထောက်အကူဖြစ်သည်။ The BeautyHack အယ်ဒီတာများသည်အကောင်းဆုံးမျက်နှာဖုံးများကိုသစ်သီးကောက်နုတ်ချက်များနှင့်စမ်းသပ်ပြီးသူတို့၏စီရင်ချက်ကိုချပေးခဲ့သည်။ အသီးမှထုတ်ယူသောအသီးများနှင့်မျက်နှာဖုံးဟန်ချက်ညီအောင် Fruit Balancing ... စာဖတ်ခြင်း Continue အသီးမှထုတ်ယူထားသောအကောင်းဆုံးမျက်နှာဖုံးများ
ဘေးတိုက်ပုံစံပုံစံ-အကောင်းဆုံးကြယ်ဥပမာ ၁၅ ခု
[ad_1] TOT ခွဲသောနကျယ်ကောင်သည်လက်တွေ့ကျကျမည်သည့်ဆံပင်ပုံစံကိုမဆိုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ပါးလွှာသောဆံပင်ပိုင်ရှင်များအတွက်၎င်းကိုလုံးဝအစားထိုး။ မရပါ။ ဤတွင်ဘေးခွဲဆံပင်ပုံစံများ၏အကောင်းဆုံးကြယ်ပွင့်များနှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ ပြန်လုပ်၍ အမှားများကိုရှောင်ကြဉ်ပုံကိုဖော်ပြသည်။ လှိုင်းတွန့်ဘော့ကိုအလယ်အလတ်အရှည်ကောက်ကွေးများနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းကရိုက်နှက်ရန်သာမက ... စာဖတ်ခြင်း Continue ဘေးတိုက်ပုံစံပုံစံ-အကောင်းဆုံးကြယ်ဥပမာ ၁၅ ခု
မုန့်ဖုတ်မိတ်ကပ် - ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲ
[ad_1] Vizagist Christina Novikova - သင်ကိုယ်တိုင်မုန့်ဖုတ်ရန်မည်သို့နှင့်ထိုက်တန်သည်၊ နှင့်မည်သို့သောမိတ်ကပ်များအတွက်သင့်တော်သောထုတ်ကုန်များအကြောင်း Christina Novikova visagiste မုန့်ဖုတ်ခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ မုန့်ဖုတ်သည်၊ ရုပ်ရှင်၊ ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့်ကော်ဇောနီပေါ်တွင်သုံးသောစင်မြင့်မိတ်ကပ်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့မိတ်ကပ်ကိုလူကြိုက်များသည် ... စာဖတ်ခြင်း Continue မုန့်ဖုတ်မိတ်ကပ် - ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲ
ထပ်မလုပ်ပါနဲ့။ တစ်ချိန်လုံးဆိုးဝါးကျော်ကြားသောဆံပင်ပုံစံ ၂၅ မျိုး
[ad_1] DJennifer Lopez သည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်အော်စကာဆုပေးပွဲသို့ရောက်လာပြီး Kristen Stewart သည်သူမ၏ရယ်စရာကောင်းသောဆံပင်ပုံစံများဖြင့်ဓာတ်ပုံဆရာများနှင့်ဝေဖန်သူများကိုပုံမှန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ BeautyHack သည်ထိပ်တန်းကျသောအရာများဖြစ်သော Ivan Anisimov နှင့်စတားကျရှုံးမှုများကိုဆွေးနွေးရာတွင်ပျော်စရာများစွာရှိသည်။ Ivan Anisimov ထိပ်တန်း stylist ပုံရိပ်အေဂျင်စီ Embassy of Style Jennifer Lopez ပထမတော့ဒီပုံကိုငါထင်ခဲ့တယ်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ထပ်မလုပ်ပါနဲ့။ တစ်ချိန်လုံးဆိုးဝါးကျော်ကြားသောဆံပင်ပုံစံ ၂၅ မျိုး
တီဗီစီးရီးမှအဓိကဆိုးသွမ်းသောအလှတရား ၁၀ ခု
[ad_1] တီဗီစီးရီး“ Clone” မှ TOovarious Maiza၊ “ Dream Coast” မှကြောင်သူတော် Esmeralda နှင့်လူဆိုးတို့၏နောက်ထပ်အမှတ်ရစရာ ၈ ချက် Daniela Escobar (Maiza) ။ “ Clone” ဇာတ်လမ်းတွဲသည်အလွန်ဆိုးဝါးပြီးစိတ်မချမ်းသာသော Maiza ၏အခန်းကဏ္ is သည်ထိုအချိန်ကစတင်ခဲ့သောမင်းသမီး Daniela Escobar ၏ပထမဆုံးကြီးမားသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်ကောင်သည်မသင်္ကာစရာဖြစ်လာသည်။ ... စာဖတ်ခြင်း Continue တီဗီစီးရီးမှအဓိကဆိုးသွမ်းသောအလှတရား ၁၀ ခု
[ad_1] လွန်ခဲ့သောအနှစ်နှစ်ဆယ်က ၁၉၉၉ ခုနှစ်မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် Choderlos de Laclos ၏“ Dangerous Liaisons” ဝတ္ထု၏စတုတ္ထနှင့်အကျော်ကြားဆုံးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောရုပ်ရှင်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်သည် ၁၈ ရာစုမှ ၂၀ သို့ပြောင်းသွားပြီးပြင်သစ်အစားလှပသော New York သည်ဖန်သားပြင်များပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်။ မင်းရက်စက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြန်ကြည့်ဖို့စီစဉ်နေတုန်း BeautyHack ... စာဖတ်ခြင်း Continue ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောသရုပ်ဆောင်များမည်သို့ပြောင်းလဲသွားသနည်း
နွေ ဦး တွင်သင်၏အသားအရည်ကိုမည်သို့စောင့်ရှောက်မည်နည်း - အရေပြားအထူးကုဆရာ ၀ န်၏အကြံဥာဏ်
[ad_1] TT အလွန်အေးသောဂရုစိုက်မှုနှင့်အေးမြသောရာသီ၌စိတ်ခံစားမှုရှိသောထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းသည်နွေးထွေးမှုစတင်ခြင်းနှင့်အတူအသားအရေသည်အပြစ်ကင်းစင်လိမ့်မည်ဟုအာမမခံပါ။ မတူညီတဲ့အသားအရေအမျိုးအစားတွေကိုဂရုစိုက်ပြီးပြီးပြည့်စုံတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုတဲ့အလှအပလျှို့ဝှက်ချက်များ ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုသိထားပြီးသား… စာဖတ်ခြင်း Continue နွေ ဦး တွင်သင်၏အသားအရည်ကိုမည်သို့စောင့်ရှောက်မည်နည်း - အရေပြားအထူးကုဆရာ ၀ န်၏အကြံဥာဏ်
[ad_1] WITHS ဟာကွက်များ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်များ၊ ဟောလိဝုဒ်ရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ The BeautyHack ရွေးချယ်မှုတွင်အသုံးများသောဘာသာစကားတစ်ခုကိုရှာမတွေ့နိုင်သောကြယ် ၂၀ ပါ ၀ င်သည်။ Madonna vs. Gwyneth Paltrow အော်စကာဆုရမင်းသမီးနှင့်ပေါ့ပ်ဘုရင်မတို့သည်မကြာခဏကျိန်ဆိုသူငယ်ချင်းများအဖြစ်ပြောလေ့ရှိသည်။ Madonna နဲ့ Gwyneth တို့ဟာအချိန်တော်တော်ကြာနွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်ခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ စာဖတ်ခြင်း Continue တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အဆင်မပြေတဲ့ကြယ် ၂၀
ရယ်စရာအလှဆုံး memes ၃၀
[ad_1] ရယ်စရာအလှဆုံး memes ၃၀ ခု [ad_30]
အချိန်တိုင်းအလှဆုံးသမ္မတမယား ၁၀ ယောက်
[ad_1] ပြင်သစ်အမျိုးသမီး Brigitte Macron မှအဇာဘိုင်ဂျန်နှင့် Cote d'Ivoire မှပထမဆုံးအမျိုးသမီးများ။ Melania trump နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းသည်သမ္မတကတော်၏အခြေအနေမဟုတ်၊ Melania က ၂၀၁၆ တွင် American GQ သို့ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်လောကီနည်းလမ်းဖြင့်ကြယ်သည်သတင်းမှဘ ၀ ကိုဝေမျှခဲ့ပြီးအခန်းကဏ္ “ကို“ ကြိုးစား” ခဲ့သည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue အချိန်တိုင်းအလှဆုံးသမ္မတမယား ၁၀ ယောက်
ခြောက်သွေ့သောအသားအရေအတွက်အခြေခံကောင်း ၅ ခု
[ad_1] ကြာပန်းပန်းရေ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောဂရုစိုက်မှုအာနိသင်နှင့်ခြောက်သွေ့သောအသားအရေအတွက်အခြားရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတို့ပါ ၀ င်သော BB လိမ်းဆေး-ဆောင်းပါးအယ်ဒီတာချုပ် BeautyHack Karina Andreeva ၏ kandreevaa@kandreevaa ... Karina Andreeva Chief BeautyHack ၏အယ်ဒီတာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ခြောက်သွေ့လွယ်သောအသားအရေရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် foundation ရွေးချယ်မှုကိုချဉ်းကပ်သည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ခြောက်သွေ့သောအသားအရေအတွက်အခြေခံကောင်း ၅ ခု
[ad_1] Vand အလှအပအနုပညာရှင် Kelly Baker သည်ဟောလိဝုဒ်တွင် ၁၇ နှစ်ကြာလက်တွဲခဲ့ပြီးထိုမိန်းကလေးအား“ မျက်ခုံးမွှေးနတ်သမီး” ဟုခေါ်ထိုက်သည်။ သူမ၏ဖောက်သည်စာရင်းတွင် Kardashian-Jenner မျိုးနွယ်စု၊ Shay Mitchell၊ Cardi B၊ Zendaya၊ Ariana Grande၊ Game of Thrones နှင့်အခြားသရုပ်ဆောင်တစ်ဒါဇင်တို့ပါဝင်သည်။ V Instagram မှ Kelly ၏ဘဝသည် ... စာဖတ်ခြင်း Continue နတ်သမီးမျက်ခုံး၊ ပုံသဏ္perfectန်ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
[ad_1] V ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကဆိုဗီယက်ခေတ်မိသားစု ၀ င်ဘဝ၌ဝါသနာအသစ်တစ်ခုပေါ်လာသည်။ ထိုမျှမဝေးသောအချိန်များတွင် disk များသည်ရှားပါးခဲ့သည်၊ telenovela မည်သို့အဆုံးသတ်မည်ကိုရှာဖွေရန်၊ ညနေတိုင်းသင်အရာအားလုံးကိုချွတ်ပြီးဖန်သားပြင်မှာထိုင်ခဲ့ရသည်။ သူရဲကောင်းတွေ… စာဖတ်ခြင်း Continue အလို! ဘရာဇီးတီဗီဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာကလေးသရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတွေကဒီနေ့ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲ။
ငါ Achromin ကိုဘယ်နှစ်ပတ်စမ်းသပ်ခဲ့သလဲ
[ad_1] NS ဆိုဗီယက်နှင့်ဆိုဗီယက်ခေတ်လွန်တိုက်ခန်းတစ်ခန်း၏ရေချိုးခန်းတွင်တွေ့နိုင်သောနာမည်ကျော်ပန်းရောင်နှင့်အဝါနုရောင်ရှိသောထုပ်ပိုးမှုတွင်ကျော်ကြားသောအဖြူရောင်ခရင်မ်ကိုသတိရပါ။ ထိုအချိန်မှစ၍ အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုများကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စတိုးဆိုင်စင်များပေါ်တွင်မွမ်းမံထားသော (အတွင်းနှင့်အပြင်) ဗားရှင်းဖြင့်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ BeautyHack အယ်ဒီတာ Yulia Kozoliy သည်သူမ၏ပုံမှန်အားစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ငါ Achromin ကိုဘယ်နှစ်ပတ်စမ်းသပ်ခဲ့သလဲ
ဧပြီ ၁ ရက်မှာကြယ်တွေကငါတို့ကိုဘယ်လိုဟာသလုပ်ခဲ့လဲ။
[ad_1] ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းမတိုင်မီကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ BeautyHack - ငါတို့ယုံကြည်ခဲ့တဲ့မနေ့ကကြယ်တွေရဲ့ဟာသတွေအကြောင်း။ Justin Bieber သည်မနေ့က Bieber စုံတွဲအတွက်သတင်းကောင်းကိုမျှဝေခဲ့သည် - Haley သည်ကလေးတစ် ဦး ကိုမျှော်လင့်နေသည်။ သက်သေအနေနှင့်ဂျက်စတင်ကသန္ဓေသားလောင်းနှင့်အာထရာဆောင်းရိုက်စစ်ဆေးသည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ဧပြီ ၁ ရက်မှာကြယ်တွေကငါတို့ကိုဘယ်လိုဟာသလုပ်ခဲ့လဲ။
8 Miss World သည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ဖူးစာဖက်တစ်ခုဖြစ်သည်
[ad_1] စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖူးစာပါသည့် Miss World ၈ ခု [ad_8]
သင်ပြုလုပ်သောပုံစံအမှား ၆ ချက်
[ad_1] ပုံစံထုတ်ကုန်များအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသည်အဘယ်အရာကို ဦး တည်စေနိုင်သနည်း၊ စတိုင်အတွက်မှန်ကန်သောခေါင်းဖြီးကိုမည်သို့ရွေးချယ်ပုံနှင့်ဆံပင်ကိုအဘယ်ကြောင့်အေးစေရန်လိုအပ်သနည်း။ WELLA အမျိုးသားကျွမ်းကျင်သူ Igor Kimyashov - ဆံပင်စတိုင်လ်လုပ်ရာတွင်လုပ်လေ့ရှိသောအမှားများအကြောင်း Igor Kimyashov အမျိုးသားကျွမ်းကျင်သူ WELLA အမှား # 1 ... စာဖတ်ခြင်း Continue သင်ပြုလုပ်သောပုံစံအမှား ၆ ချက်
ကလေးဘဝတုန်းကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကြယ် ၁၀ ပွင့်
[ad_1] V အသက် ၆ လတွင်အိန်ဂျလီနာဂျိုလီဘာဇာတ်ကားကိုရိုက်ခဲ့သနည်း၊ Drew Barrymore သည် ၁၁ လသားအရွယ်တွင်သူမ၏ပထမဆုံးအခန်းကဏ္getကိုရယူနိုင်ခဲ့ပုံနှင့်နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ကားငယ်ကို Elijah Wood ကိုသင်မြင်နိုင်ပါသလား။ BeautyHack ၏အထူးရွေးချယ်မှုတစ်ခုတွင်ကလေးဘဝမှတီဗီဖန်သားပြင်များတွင်ပေါ်လာသောကြယ်ပွင့်များရှိသည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ကလေးဘဝတုန်းကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကြယ် ၁၀ ပွင့်
ပြဿနာမရှိပါဘူး? အသက်အရွယ်ကွာခြားချက်ကြီးသောအလှဆုံးစုံတွဲ ၁၀ တွဲ
[ad_1] R ၁၀ နှစ်၊ အနှစ် ၂၀ နှင့်ရာစုနှစ်တစ်ခု၏လေးပုံတစ်ပုံ၌ပင်ဤကြယ်များသည်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေပါ၊ သူတို့သည်စစ်မှန်သောအချစ်အတွက်အတားအဆီးမရှိကြောင်းသူတို့၏ဥပမာအားဖြင့်သက်သေပြသည်။ BeautyHack တွင်အသက်အရွယ်သည်အတားအဆီးမရှိသောအလှဆုံးကြယ်ပွင့်စုံတွဲဆယ်တွဲရှိသည်။ Nick Jonas နှင့် Priyanka Chopra ... စာဖတ်ခြင်း Continue ပြဿနာမရှိပါဘူး? အသက်အရွယ်ကွာခြားချက်ကြီးသောအလှဆုံးစုံတွဲ ၁၀ တွဲ
[ad_1] NSWinter, laser, ultrasonic, photo-, electro- … ၂၁ ရာစုတွင်“ epilation” ဟူသောစကားလုံးသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ယခုအခါအိမ်၌ပင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးနာကျင်မှု၊ အရေပြားတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အခြားပြသနာများမရှိပဲနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာမိန်းကလေးအားလုံး၏အိပ်မက် - ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုအထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီခွဲစိတ်မှုမှအကျိုးကျေးဇူးရခဲ့သောကြယ် ၁၀ ပွင့်
[ad_1] BElla Hadid, Megan Fox နှင့် Blake Lovely တို့သည်ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီခွဲစိတ်မှုများကိုလူသိရှင်ကြားမကြေငြာခဲ့ပေ။ ဒါပေမယ့်အသွင်အပြင်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားတဲ့နောက်မှာမိန်းကလေးတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကကုန်းတက်သွားတယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ အလှအပဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုတွင်အလှအပဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဆရာဝန်များအား“ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟုအခြားမည်သူပြောသင့်သနည်း။ Megan Fox Megan Fox သည်ပလပ်စတစ်ဆာဂျရီနှင့်အခြားမည်သည့်ခွဲစိတ်မှုကိုမဆိုငြင်းဆိုသည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီခွဲစိတ်မှုမှအကျိုးကျေးဇူးရခဲ့သောကြယ် ၁၀ ပွင့်
Maria Ginzburg နှင့် Rasida Lakoba-The-Face-Only စီမံကိန်းသစ်အကြောင်း
[ad_1] NS အလှအပရေးရာဆရာ ၀ န်ကိုဘာကြောင့်စပြီးတွေ့ဖို့အချိန်မပေးနိုင်တာလဲ။ ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ခွဲခန်းအင်္ကျီနဲ့ထိုးဆေးတွေမှာဆရာဝန်တွေကိုကြောက်သလား။ မင်းရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပါ၊ သူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုဂရုစိုက်ချင်သူတွေ၊ အချိန်ကုန်သက်သာလိုသူတွေအတွက် The-face-only ပရောဂျက်အသစ်။ Pop-up ပုံစံသည်စိတ်ဒဏ်ရာဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုမဆိုလိုပါ။ စာဖတ်ခြင်း Continue Maria Ginzburg နှင့် Rasida Lakoba-The-Face-Only စီမံကိန်းသစ်အကြောင်း
ငါတို့ချစ်သော Moscow Fashion Week မှအလှအပလမ်းကြောင်း ၅ ခု
[ad_1] Mercedes-Benz ဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်ရုရှားသည် New York, London, Milan နှင့် Paris တို့တွင်အဓိကဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်များကိုပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ယခုနှစ်တွင်ဒီဇိုင်နာများဖြစ်သော Yulia နှင့် Alisa Ruban, Alena Akhmadullina, Alexander Arutyunov တို့သည်ဖက်ရှင်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်။ မော်စကို catwalks တွင်ကောင်းမွန်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခဲ့သောကမ္ဘာ့အလှအပလမ်းကြောင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ဆံပင်စိုစေသောအာနိသင်များထဲမှတစ်ခု ... စာဖတ်ခြင်း Continue ငါတို့ချစ်သော Moscow Fashion Week မှအလှအပလမ်းကြောင်း ၅ ခု
[ad_1] V ၂၀၀၀ ခုနှစ်များအစောပိုင်းတွင်ရုရှားရုပ်သံတစ်ခုတွင်ပုံစံအသစ်တစ်ခုပေါ်လာခဲ့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တီဗီကြည့်ရှုသူသန်းပေါင်းများစွာသည်“ မှန်နောက်ကွယ်” သို့မဟုတ်“ နောက်ဆုံးသူရဲကောင်း” ဟူသောစာစောင်သစ်အတွက်ကြောင့်အရာအားလုံးကိုစွန့်ပစ်ခဲ့သည်။ တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်ကကြယ်ပွင့်တွေဘာဖြစ်သွားလဲ ... စာဖတ်ခြင်း Continue ပထမဆုံးရုရှားသရုပ်မှန်ပြပွဲမှာပါဝင်သူတွေဘာဖြစ်ခဲ့လဲ
[ad_1] ယခုအပတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသစ်များစုဆောင်းမှုတွင် AParty rum၊ ခရီးသွားဆီ၊ ပင်ပန်းသောခြေထောက်မှုတ်ဆေးများနှင့်အခြားအရာများ ဆံပင်အဆီ Tahitian Monoi, Alan Hadash The Israel Khadash အမှတ်တံဆိပ်၊ အစ္စရေး၏ရိုးရာဓလေ့များနှင့်ခေတ်မီနည်းပညာများပေါင်းစပ်ထားသော Alan Khadash အမှတ်တံဆိပ်သည်ရုရှား၌မကြာသေးမီကပေါ်ထွက်လာသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့စုစည်းမှုအကြောင်းသင့်အားသတိပေးချင်သည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ဝယ်ဖို့မမေ့နဲ့။ ယခုတစ်ပတ်အတွက်ထိပ်တန်းထုတ်ကုန်အသစ် ၁၀ ခု
[ad_1] Vesna ။ ဆိုလိုသည်မှာရဲရင့်ခြင်းနှင့်လေးလံသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်အချိန်သည်ကုန်ဆုံးသွားပြီဟုဆိုလိုသည်။ လေဖြန်းဆေးနှင့်လေမှူတို့ကတန်းစီနေသည်။ BeautyHack အယ်ဒီတာများသည်အစိုဓာတ်ရှိသောအသားအရေအတွက်“ အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများ” ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်။ Moisturizing lotion Glacial Spray Lotion, Skyn ​​Iceland မှအကြီးတန်းအယ်ဒီတာ BeautyHack Anastasia Speranskaya ၏အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ megalopolises (ဒေသခံများသာမက) ပါ။ တစ်ခုတွေ့တယ်… စာဖတ်ခြင်း Continue အယ်ဒီတာများအကြိုက်များ
ကြယ်များရဲ့ရွေးချယ်မှု: ထိပ်တန်းအနံ့ ၁၂ မျိုး
[ad_1] Hatalya Vodianova, Angelica Timanina, Maria Ivakova နှင့်အခြားကြယ်များ - သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာချစ်ခဲ့သောအမွှေးနံ့များအကြောင်း တီဗီတင်ဆက်သူ Maria Ivakova ကိုရွေးချယ်ခြင်း: အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ပုံတူ၊ Frederic Malle ငါ Frederic Malle ၏နွေးထွေးသောစပ်သော Portrait Of A Lady ပုံသဏ္myန်သည်ကျွန်ုပ်၏အမှတ်ရစရာရနံ့ဖြစ်သည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ကြယ်များရဲ့ရွေးချယ်မှု: ထိပ်တန်းအနံ့ ၁၂ မျိုး
[ad_1] V ၉၀ ခုနှစ်အစောပိုင်းများတွင်ညနေတိုင်းတီဗီအစီအစဉ်များကိုကြည့်ခြင်းသည်မိသားစုတိုင်းအတွက်အစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲကအချို့သည်ငိုကြွေးရန်နှင့်သူရဲကောင်းများကိုစာနာရန်နှင့်အချို့ကသွေးထဲတွင် endorphins ၏“ အစိတ်အပိုင်း” ကိုရရှိခဲ့သည်။ ရယ်မောခြင်းသည်အသက်ရှည်စေသောကြောင့် BeautyHack သည်အကောင်းဆုံးကိုးကားချက်များကိုစုစည်းခဲ့သည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ၉၀ ခုနှစ်များကိုးကွယ်သည့်တီဗီစီးရီးများမှရယ်စရာအကောင်းဆုံးကိုးကားချက်များ
12 ၏အဓိကအရိပ်တွင်လက်သည်းစိတ်ကူး ၁၂ ချက်
[ad_1] နံပါတ် ၁၆ မှ ၁၅၄၆ အထိရှိသော Coral သည် Pantone Colour Institute ၏အဆိုအရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏အဓိကအရောင်ဖြစ်သည်။ တောက်ပသောအကောင်းမြင်အရိပ်တွင်အလှအပပစ္စည်းများအကြောင်းအကြောင်းအရာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုတစ်ခုချင်းစီအလွယ်တကူပြန်လုပ်နိုင်သော manicure options များနှင့်အလှပြင်ဆိုင်များကိုထုတ်ဝေသည်။ ဘယ်မှာလုပ်ရမလဲ - အလှပြင်ဆိုင် Inhype Beauty Zone လိပ်စာ: Moscow, 16st Smolensky per ။ , … စာဖတ်ခြင်း Continue 12 ၏အဓိကအရိပ်တွင်လက်သည်းစိတ်ကူး ၁၂ ချက်
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက်သတို့သမီးများအတွက်မင်္ဂလာဆောင်မိတ်ကပ်ပုံစံ ၇ မျိုး
[ad_1] လွတ်လပ်သောမိတ်ကပ်ပညာရှင် Yulia Kupriy (@kupryimakeup) သည်ဤမင်္ဂလာဆောင်ရာသီတွင်မည်သည့်မြှားများနှင့်သက်ဆိုင်သနည်း၊ သတို့သမီးတိုင်းသည်သူမ၏ပိုက်ဆံအိတ်၌ highlighter နှင့်ပန်းရောင် lip gloss ရှိသင့်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ Julia Kupriy လွတ်လပ်သောမိတ်ကပ်ပညာရှင်“ ယနေ့တွင်အနာဂတ်သတို့သမီးများသည်သူတို့၏ပြီးပြည့်စုံသောမင်္ဂလာဆောင်မိတ်ကပ်ကိုရှာဖွေရန်မဂ္ဂဇင်းများကိုကြည့်နေကြသည်။ Pastel အရောင်များနှင့် Matte texture များ ... စာဖတ်ခြင်း Continue ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက်သတို့သမီးများအတွက်မင်္ဂလာဆောင်မိတ်ကပ်ပုံစံ ၇ မျိုး
[ad_1] V 90s ဘရာဇီးတီဗီစီးရီးများသည်သူတို့၏ကျော်ကြားမှုတွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ နာမည်ကြီးမင်းသမီးများသည် ၁၅ နှစ်ကြာဘာလုပ်ခဲ့သည်ကိုစိတ်မ ၀ င်စားသောသူတို့သည် ၀ မ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်၊ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကြော်ငြာစာချုပ်များသို့ ၀ င်လာပြီးကလေးများကိုဆက်ကစားသည်။ BeautyHack တွင်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဘဝများနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကြယ်ပွင့်ကိုးခုရှိသည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue သူတို့ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ ဘရာဇီးမင်းသမီးများ၏အတက်နှင့်အကျ
စက်မှုလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲစေသော off-the-shelf မော်ဒယ် ၆ ခု
[ad_1] V အီးယူသည်ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းတွင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းနှင့်ဝေးကွာသည်။ American Vogue မျက်နှာဖုံးပေါ်ရောက်သောအခါဥပမာများအရမော်ဒယ်များသည်ပြိုင်ပွဲကဲ့သို့ပိုမိုလေးနက်သောပြသနာများနှင့်အတူမြေပြင်ပေါ်မှဆင်းသွားကြသည်။ BeautyHack ၌ပုံမှန်မဟုတ်သောအသွင်အပြင်ရှိသောသတ္တိရှိသောမိန်းကလေးခြောက်ယောက်ခန့် Beverly Johnson Beverly သည်တစ်ယောက် ... စာဖတ်ခြင်း Continue စက်မှုလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲစေသော off-the-shelf မော်ဒယ် ၆ ခု
နွေ ဦး အတွက်အကြိုက်ဆုံးကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဆံပင်နံ့ ၅ မျိုး
[ad_1] မော်စကိုမြို့၌ VSpring သည်လုံးဝကွဲပြားခြားနား။ မခန့်မှန်းနိုင်ပါ၊ အနည်းဆုံး +၁၀ ခန့်ရုတ်တရက်ပူနွေးလာခြင်း၊ ပူနွေးသောရာသီဥတု (သားရေဂျာကင်တွင်ပူသော) နှင့်တောက်ပသောနေရောင် (သို့) သိသိသာသာနှင်းကျခြင်းနှင့်သာမိုမီတာတွင်အနုတ် နောက်တစ်နေ့။ ဒါကြောင့်ရာသီဥတုကမင်းရဲ့စိတ်ကိုမခုန်စေနဲ့ ... စာဖတ်ခြင်း Continue နွေ ဦး အတွက်အကြိုက်ဆုံးကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဆံပင်နံ့ ၅ မျိုး
သူတို့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုအသိအမှတ်ပြုမှုကိုကျော်လွန်ပြီးပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ကြယ် ၁၀ ပွင့်
[ad_1] သို့ Jessica Simpson သည် ၃၀ ကီလိုဂရမ်ကိုမည်သို့ပစ်ချခဲ့သနည်း၊ Victoria Lopyreva ၏သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် Polina Gagarina တို့ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းအောင်မည်သို့ကူညီခဲ့သနည်း။ အသိအမှတ်ပြုမှုကို ကျော်လွန်၍ သူတို့၏ရုပ်ပုံလွှာများကိုပြောင်းလဲခဲ့သောနာမည်ကြီးများသည် BeautyHack စုဆောင်းမှုတွင်ရှိသည်။ Jessica Cypson Jessica ၏အမြင့်သည် ၁၆၁ စင်တီမီတာ၊ စံအလေးချိန်မှာ ၅၅ ကီလိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ Simpson သည်အဝလွန်ရန်အလားအလာများလာပြီး ... စာဖတ်ခြင်း Continue သူတို့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုအသိအမှတ်ပြုမှုကိုကျော်လွန်ပြီးပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ကြယ် ၁၀ ပွင့်
ဂရုတစိုက်! မင်းဆံပင်ကိုပျက်စီးစေတဲ့ကြယ်ပွင့်ပုံစံဆံပင်ပုံစံ ၂၂ မျိုး
[ad_1] TO ဘယ်ဆံပင်ပုံစံတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့နေ့တိုင်းမလုပ်သင့်ဘူးလဲ။ Stylists များနှင့်ဆက်ဆံပါ။ Beauty Stop26 မှ stylist Artak Hayrapetyan, 1. Combs ခေါင်းဖြီးခြင်း၏အခြေခံသည်ဆံပင်ကိုအသံအတိုးအကျယ်ရှိစေရန်တမင်တကာရှုပ်ယှက်ခတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤအကြောင်းကြောင့်ဆံပင်၏မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းပုံသည်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြေးခွံများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲကွာသွားသည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ဂရုတစိုက်! မင်းဆံပင်ကိုပျက်စီးစေတဲ့ကြယ်ပွင့်ပုံစံဆံပင်ပုံစံ ၂၂ မျိုး
[ad_1] TO ကြယ်တွေကပြီးပြည့်စုံတဲ့စတိုင်လ်အတွက်ဘယ်ထုတ်ကုန်တွေကိုသုံးပြီးကော်ဇောနီထဲက Natasha Poly ရဲ့မိတ်ကပ်ကိုဘယ်လိုပြန်လုပ်သလဲ။ ပစ္စည်း၏ဒုတိယအပိုင်းသည်အလှတရားစာရွက်မရှိသောမိန်းကလေးများအကြောင်းဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး link ကိုဖတ်ပါ။ Sienna Miller Sienna ၏တရားဝင် Instagram အကောင့်တွင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံသာရှိသည်၊ သို့သော်အခြားပရိုဖိုင်းများလုံးလုံးလျားလျားရှိသည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue အလှမပျက်ဖူးတဲ့ကြယ် ၂၀
နွေ ဦး အတွက်အကောင်းဆုံးကူရှင် ၂၀
[ad_1] TO သို့အပေါ့ပါးဆုံးဖုံးအုပ်မှုနှင့်မျက်လုံးစက်ဝိုင်းများအောက်ရှိကူရှင်ကိုမည်သို့ဖုံးလွှမ်းသနည်း။ မိတ်ကပ်အနုပညာရှင်များနှင့်ဘလော့ဂါများသည်အလုပ်နှင့်ဘဝတွင်သူတို့သုံးသောကိရိယာများအကြောင်းပြောကြသည်။ Victoria Moiseeva လွတ်လပ်သောမိတ်ကပ်ပညာရှင်၊ ဘလော့ဂါ Cushion Air Fit၊ A'pieu ကူရှင်များ၏လှုပ်ရှားမှုသည်ဤအမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီးယခုအချိန်တွင် ... စာဖတ်ခြင်း Continue နွေ ဦး အတွက်အကောင်းဆုံးကူရှင် ၂၀
[ad_1] Vizazhist Evgenia Rusinovskaya သည်ပြီးပြည့်စုံသောနှုတ်ခမ်းနီကိုမည်သို့ရှာရမည်ကိုပြောပြခဲ့ပြီး blondes များအတွက်သူမ၏အကြိုက်ဆုံးထုတ်ကုန်များကိုဝေမျှခဲ့သည်။ Evgeniya Rusinovskaya Visagiste နှုတ်ခမ်းနီအရောင်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါအရောင်အမျိုးအစား (အပူ (သို့) အေး) နှင့်ဆံပင်၏အရိပ်မှရှေ့ဆက်ပါ။ ပူနွေးသောအရောင်များသည်ပူနွေးသောရွှေရောင်ရှိသောမိန်းကလေးများအတွက်သင့်တော်သည်။ အအေးမိသူများအတွက် ... စာဖတ်ခြင်း Continue ရွှေရောင်များအတွက်ခေတ်စားသောနှုတ်ခမ်းနီအရိပ် ၂၀
လူတိုင်းနှင့်လိုက်ဖက်သောအိန်ဂျလီနာဂျိုလီဆံပင်ပုံစံ ၁၂ မျိုး
[ad_1] BeautyHack သည်ကြယ်အတွက်ရိုးရှင်း။ စွယ်စုံဆံပင်ပုံစံများကိုရွေးချယ်ပြီး stylist Anna Portkova အား၎င်းတို့အားမှတ်ချက်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ Anna Portkova Trichologist-အတိုင်ပင်ခံအစုအဝေးများ၊ သရဖူတွင်အသံအတိုးအကျယ်၊ အနှိမ်ခွဲခြင်း၊ ဆံပင်ကိုပြန်ကျွတ်ခြင်း၊ ဆံပင်စများ မင်းမှာရှိနေသရွေ့ဒါတွေအားလုံးကိုအိမ်မှာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်း Continue လူတိုင်းနှင့်လိုက်ဖက်သောအိန်ဂျလီနာဂျိုလီဆံပင်ပုံစံ ၁၂ မျိုး
အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံး Sauna: အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ထိခိုက်မှုများ
[ad_1] VYou သည်ခေတ်မီကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာ (သို့) အလှပြင်ဆိုင်တွင်အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးရေနွေးငွေ့သုံးချွေးပေါင်းအိမ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်သောသူများအကြားရေပန်းစားသည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည်လှိုင်းများသည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသောအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ တဲအတွင်း၌အစိုဓာတ်မရှိသောကြောင့်ချွေးထွက်များစေပြီးအဆိပ်အတောက်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံး Sauna: အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ထိခိုက်မှုများ
အလှပြင်ဆိုင်အသစ် ၄ ခုကိုသွားလည်ပါ
[ad_1] မျက်နှာအလှအပထိန်းသိမ်းမှုအကြောင်းလူတိုင်းသိသော Ot beauty space၊ ထိပ်တန်း stylist Yegor Ryabushko ၏ပရောဂျက်အသစ်။ The-Face-Only ကိုအလွန်အလုပ်များသောမိန်းကလေးနှစ် ဦး က Rasario အမှတ်တံဆိပ် Rasida Lakoba ကိုဖန်တီးသူနှင့် Wax & Go အလှပြင်ဆိုင်ဆိုင် Maria Maria Ginzburg ကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက်မှာသားသမီးခုနစ်ယောက်ရှိတယ်။ ထို့ကြောင့်… စာဖတ်ခြင်း Continue အလှပြင်ဆိုင်အသစ် ၄ ခုကိုသွားလည်ပါ
[ad_1] RBeautyHack အယ်ဒီတာများသည်အာကာသထဲမှမြင်နိုင်သောနူးညံ့သောတောက်ပမှုနှင့်တောက်ပသော eyeshadow များ၊ အရောင်တင်ဆီများ၊ အမှုန့်များနှင့် glitters များကိုစမ်းသပ်သည်။ Highlighter Skin Love Glow Glaze Stick, BeautyHack Anastasia Speranskaya ၏အကြီးတန်းအယ်ဒီတာ၏ Becca Choice သည်မတ်လတွင် Becca သည် eco-friendly တံဆိပ်ပါကုန်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သော Skin Love၊ စုစည်းမှုအသစ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်အရာအားလုံးပါ ၀ င်သည် ... စာဖတ်ခြင်း Continue ရိုးရှင်းစွာတောက်ပ။ အကောင်းဆုံးတောက်ပသောထုတ်ကုန်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
[ad_1] BeautyHack ၏အကြီးတန်းအယ်ဒီတာနှင့် Dermadrop လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုစမ်းသပ်ရန်ဆန်းသစ်သောအလှကုန် Gen87 ဆေးခန်းသို့သွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မည်သူအတွက်သင့်တော်သနည်း၊ ၎င်းကို biorevitalization ၏နာကျင်မှုမရှိသော analogue အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သနည်း။ Anastasia Speranskaya အကြီးတန်းအယ်ဒီတာ BeautyHack နေရောင်သည်ပြင်းသည်၊ လေတိုက်ခတ်ခြင်း၊ ဘက်ထရီများခြောက်သွေ့ခြင်း - အရေပြားတိုင်းမရနိုင်ပါ။ စာဖတ်ခြင်း Continue Dermadrop လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုငါဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့လဲ
[ad_1] အောက်ခြေအရောင်တင်အလွှာသည်ပင်ပန်းသော်လည်းသင် Sistine Chapel ကိုသင်၏လက်သည်းများပေါ်တွင်ဆွဲရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ-၎င်းသည်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပါသလား။ BeautyHack သည် minimalism ကိုနှစ်သက်သူများအတွက်လက်သည်းပန်းချီရွေးချယ်မှုများစုဆောင်းခဲ့ပြီးမော်စကိုရှိအလှပြင်ဆိုင်များကို၎င်းတို့ထပ်တလဲလဲပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ သခင်ကိုပြပါ။ ဘယ်မှာလုပ်ရမလဲ - အလှပြင်ဆိုင် Inhype … စာဖတ်ခြင်း Continue လက်သည်းအလှဆင်ခြင်းကိုမကြိုက်သူများအတွက်လက်သည်းရွေးချယ်မှု ၃၀
[ad_1] မင်းရဲ့နေ့စဉ်စတိုင်လ်တွေအချိန်တွေကုန်နေလား။ ဆံပင်ကိုထွင်းထုခြင်းဖြင့်ကြာရှည်ခံပါစေ။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်အထူးဖွဲ့စည်းမှု၊ stylers သို့မဟုတ် curlers ကို အသုံးပြု၍ အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဆံပင်ကောက်ခြင်းကိုပြုပြင်သည်။ ခွင့်ပြုမိန့်သည်သုံးပတ်မှရှစ်ပတ်ကြာလိမ့်မည်။ BeautyHack - ဆံပင်ထွင်းခြင်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများအကြောင်း ဆံပင်ထွင်းထုခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ ထွင်းထုခြင်းသည်ဖန်တီးမှုဖြစ်သည်။ ... စာဖတ်ခြင်း Continue ဆံပင်ထွင်းခြင်း၊ ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုး
နှုတ်ခမ်းပေါ်တွင်အအေးမိခြင်းကိုမည်သို့လျင်မြန်စွာဖယ်ရှားနိုင်သနည်းအရေပြားအထူးကုဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ကအကြံပေးသည်
[ad_1] HL ကိုစိတ်ပျက်စရာသတင်းနှင့်စလိုက်ပါ။ ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၄% သာရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်မကူးစက်ပါ။ စည်းမျဉ်းမဟုတ်၊ သင်ကခြွင်းချက်ဖြစ်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေသည်နည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့်နှုတ်ခမ်းပေါ်တွင်အအေးမိခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်ဟူသောမေးခွန်းသည်မည်သည့်အချိန်မဆိုဖြစ်နိုင်သည်။ Dermato အလှကုန်ပညာရှင် Viktoria Britko ကဘယ်လိုပြောရမလဲ ... စာဖတ်ခြင်း Continue နှုတ်ခမ်းပေါ်တွင်အအေးမိခြင်းကိုမည်သို့လျင်မြန်စွာဖယ်ရှားနိုင်သနည်းအရေပြားအထူးကုဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ကအကြံပေးသည်
[ad_1] Fivory prints များ၊ တောက်ပသောအရိပ်များသည်တမင်တကာဂရုမစိုက်ဘဲဂရပ်ဖစ်ပါ ၀ င်သောပွတ်တိုက်မှုများနှင့်ဂန္ထဝင်ကိုယ်တုံးလုံးပုံစံများ - ဖက်ရှင်ပြပွဲများတွင်လက်မှုပညာရှင်များသည်မော်ဒယ်များ၏လက်သည်းများကိုအာရုံစိုက်ရန်နည်းလမ်းအားလုံးကိုသုံးသည်။ BeautyHack ပစ္စည်းရှိစိတ်ကူးများနှင့်အသုံးဝင်လိပ်စာများကိုယခုမော်စကိုအလှပြင်ဆိုင်များတွင်ယခုထပ်တလဲလဲပြုလုပ်နိုင်သည်။ အနီရောင်အရိပ်တွင် ... စာဖတ်ခြင်း Continue မော်စကိုမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြန်လုပ်ရမလည်း
ငါလုံးဝသုံးခဲ့တဲ့မျက်နှာထုတ်ကုန် ၅ ခု
[ad_1] RBeautyHack အယ်ဒီတာ Yulia Kozoliy - သူမနှင့်လုံးဝလိုက်ဖက်သောမျက်နှာအတွက်လိမ်းဆေးများ၊ မျက်နှာဖုံးများနှင့် emulsion များအကြောင်းနှင့်အနည်းဆုံးသင့်အာရုံစိုက်မှုကိုရထိုက်သည်။ အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ် Botanical Kinetics Hydrating Soft Crème, Aveda ငါငါ့ကိုယ်ငါ Aveda ရဲ့သစ္စာအရှိဆုံးပရိတ်သတ်တွေထဲကတစ်ယောက်လို့ငါမယူဆဘူး - ထုတ်ကုန်အားလုံးငါ့အတွက်မသင့်တော်ဘူး၊ ငါ့ ... စာဖတ်ခြင်း Continue ငါလုံးဝသုံးခဲ့တဲ့မျက်နှာထုတ်ကုန် ၅ ခု
[ad_1] TOOreian ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီခွဲစိတ်ဆရာဝန်များကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးဟုသတ်မှတ်သည်။ စာရင်းဇယားများအရပဉ္စမမြောက်အာရှအမျိုးသမီးတိုင်းသည်အနည်းဆုံးအလှကုန်ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုလုပ်ဖူးသည်။ အလှအပကိုပရိသတ်စည်းဝေးပွဲတွင်ထည့်သွင်းခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေနှင့်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုပြီးမြောက်စေခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်အထိကိုရီးယားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စစ်ဆင်ရေးအများဆုံးလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်း ... စာဖတ်ခြင်း Continue ကိုရီးယားမှာပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်မှုအကြောင်း
[ad_1] အရောင်ခြယ်သူနှင့်မိတ်ကပ်ပညာရှင်-အရောင်အမျိုးအစားသည်ယခုတန်ဖိုးနှင့်ဘာကြောင့်အလှကုန်ပစ္စည်းရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဆံပင်အရောင်ပြောင်းချင်သောအခါဤအရာအားလုံးလုံးလျားလျားအားမကိုးသင့်ပါ။ Novikova Studio မိတ်ကပ်ကျောင်းကိုဖန်တီးသူ Christina Novikova မိတ်ကပ်ပညာရှင်၊ အရောင်အမျိုးအစားအလိုက်အသွင်အပြင်ကွဲပြားနေသည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue မင်းရဲ့အရောင်အမျိုးအစားကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပြီးအဲဒါကလိုအပ်လဲ။
ဘလော့ဂါများပြောသောအရာ - Nastya Swan
[ad_1] Mdress နှင့် blogger Nastya Swan - နေ့စဉ်အလှအပဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ ကိုယ်တိုင်နှင့်အတွင်းညီညွတ်မှု၊ အာဟာရနှင့်အားကစားများအကြောင်း စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းရန်ဟန်ချက်ကိုထိန်းညှိရန်နှင့်အတွင်းစိတ်ဟန်ချက်ကိုထိန်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာအလေ့အကျင့်များ၊ စိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွင်းစိတ်အတ္တနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားကူညီပေးသည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ဘလော့ဂါများပြောသောအရာ - Nastya Swan
နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်းအလှဆုံးတီဗီတင်ဆက်သူ ၁၁ ဦး
[ad_1] Othey သည် Cindy Crawford ထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်မော်ဒယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူတည်ဆောက်နိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည် catwalk ထက်တီဗီစတူဒီယိုကိုပို ဦး စားပေးခဲ့သည်။ Ekaterina Andreeva, Mona Abu Hamze နှင့်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ အတွင်းပိုမိုလှပသော TV တင်ဆက်သူ ၉ ဦး Ekaterina Andreeva သည် Catherine ကိုကြည့်နေစဉ်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ဆေးလုံးသည်ရှိသေးသည်ဟုထင်ရသည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်းအလှဆုံးတီဗီတင်ဆက်သူ ၁၁ ဦး
မင်းရဲ့ကလေးဘ ၀ ကအကောင်းဆုံးဘရာဇီးတီဗီရှိုး ၁၀ ခု
[ad_1] V ၁၉၈၈ တွင်ပထမဆုံးဘရာဇီးတီဗီစီးရီး“ Slave Izaura” ကို USSR ၌ပြသခဲ့သည်။ Izaura dos Santos နှင့် Leoncio Almeida တို့၏အချစ်ဇာတ်လမ်းသည်ကျယ်ပြန့်သောတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးနောက်တွင်ရှိသည်။ ၈၀ အစောပိုင်းများတွင် Susana Vieira, Vera Fischer, Antonio Fagundes နှင့်အခြားနာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်များသည်မိသားစုအားလုံးနီးပါး၏“ အဖွဲ့ဝင်များ” ဖြစ်လာခဲ့သည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue မင်းရဲ့ကလေးဘ ၀ ကအကောင်းဆုံးဘရာဇီးတီဗီရှိုး ၁၀ ခု
စင်းလုံးချောလေသံနှင့်၎င်းတို့၏ analogues အတွက်ထုတ်ကုန် ၅ ခု
[ad_1] BeautyHack ၏အကြီးတန်းအယ်ဒီတာ RAnastasia Speranskaya သည်ချောမွေ့သော primer၊ တောက်ပသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောဖောင်ဒေးရှင်း၊ ရွှေအရည်နှင့်တူသော highlighter နှင့်မည်သည့်ဘတ်ဂျက်အတွက်မဆိုပြီးပြည့်စုံသောအသားအရေအတွက်စမ်းသပ်သည်။ မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်မှုအတွက် Primer Foundation Touche Éclat Blur Primer, Yves Saint Laurent သည်နာမည်ကျော်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်မှုအက်ပ်တွင်ချောမွေ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသတိရပါ။ ဒီ primer နဲ့ ... စာဖတ်ခြင်း Continue စင်းလုံးချောလေသံနှင့်၎င်းတို့၏ analogues အတွက်ထုတ်ကုန် ၅ ခု
[ad_1] Arum ကိုဝါဂွမ်းသကြားလုံးနှင့် patchouli တို့အကြားသိသိသာသာဆန့်ကျင်။ ရိုးရှင်းသော၊ ထိရောက်မှုရှိသောပယင်း၊ အပန်းဖြေ viscous spruce သစ်စေးနှင့်လိမ္မော်ရည်တစ်စက်နှင့်အခြားရနံ့တစ်စက်တို့နှင့်အတူအပန်းဖြေရန်သင့်အတွက်အဆင်ပြေသောရွေးချယ်မှုအသစ်ကိုကြည့်ပါ။ ရေမွှေးဝေဖန်သူ Ksenia Golovanova Eau de parfum Bergamote & … စာဖတ်ခြင်း Continue ခရီးသွားအရွယ်အစားပုံစံတွင်အကောင်းဆုံးရေမွှေးဖြစ်သည်
အထူးခြားဆုံးမျက်နှာဖုံး ၉ မျိုး
[ad_1] ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော BeautyHack သည်ရယ်စရာအကောင်းဆုံး၊ အထူးခြားဆုံးနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်မျက်နှာဖုံးများကိုတစ်နေ့တာလုံး ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည်။ ငါတို့ရဲ့အထင်အမြင်တွေကိုပြောပြတယ်၊ အဲဒါတွေကိုဘယ်သူကလိုအပ်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ။ အသားအရည်ကိုသန့်စင်ပြီးအာဟာရဖြည့်ပေးမည့် Two-component bubble mask သည် Double Dare, OMG! ကိုရီးယားမျက်နှာဖုံးများ Double Dare OMG! ဘလော့ဂါများသည်“ အမှတ်တံဆိပ်” အမျိုးသမီးနှင့်အတူအံ့မခန်းထုပ်ပိုးမှုအတွက်၎င်းကိုနှစ်သက်သည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue အထူးခြားဆုံးမျက်နှာဖုံး ၉ မျိုး
လူတိုင်းမက်တဲ့ရနံ့ ၁၅ မျိုး
[ad_1] L စိတ် ၀ င်စားသောရေမွှေးများ၏ဒဏ္legendaryာရီအမွှေးအကြိုင်များနှင့်အသစ်အဆန်းများသည်အထူး BeautyHack စုဆောင်းမှုတွင်ရှိသည်။ Eau de parfum Rose Oud, Korloff Paris ပြင်သစ်လူမျိုးက“ Korloff ကိုပေးတယ်ဆိုတာမင်းရဲ့အချစ်ကိုဝန်ခံဖို့ပါ။ ” ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၊ ပြန့်ကြဲနေတဲ့လက်ဝတ်ရတနာတစ်ရွက် ... စာဖတ်ခြင်း Continue လူတိုင်းမက်တဲ့ရနံ့ ၁၅ မျိုး
ဧပြီလမှာငါတို့စကားပြော၊ ပြတယ်၊ အလှအပအသစ် ၁၅ ခု
[ad_1] ဧပြီလတွင်အလှအပရေးရာအသစ် ၁၅ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုပြသသည် [ad_15]
ငယ်စဉ်က "crumpets" ဖြစ်ခဲ့သောကြယ်များ
[ad_1] V ငယ်စဉ်ကဤနာမည်ကျော်“ pyshechki” သည်အခြားသူများအကြားချစ်ခင်မှုကိုနှိုးဆော်ခဲ့သည်။ ရင့်ကျက်လာသည့်အခါ“ ခေါက်” များကိုဖယ်ရှားပြီးလှပသောအလှတရားများဖြစ်လာရန်အချိန်တန်ပြီဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ BeautyHack စုစည်းမှုတွင်သူတို့၏ငယ်စဉ်ကထွားကြိုင်းသောနာမည်ကြီးများ Jennifer Goodwin ပရိတ်သတ်ကြီးကချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ ... စာဖတ်ခြင်း Continue ငယ်စဉ်က "crumpets" ဖြစ်ခဲ့သောကြယ်များ
နိုင်ငံရေးမှာအလှဆုံးအမျိုးသမီး ၁၅ ယောက်
[ad_1] အရှေ့အလယ်ပိုင်း၏အကျော်ကြားဆုံးသမ္မတကတော်မှဘရာဇီးတွင်အလှဆုံးအမျိုးသမီးလက်ထောက်အထိ။ BeautyHack ဆောင်းပါး၌ Queen Rania, Ivanka, Melania Trump နှင့်အခြားအရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်သောအခြားအမျိုးသမီး ၁၂ ယောက် Melania trump သည်မသိဘဲ Melania သည်သူမ၏ဒေါ်နယ်ထရန့်နှင့်လက်ထပ်ပြီး ၂၀၀၅ တွင်သူမ၏နိုင်ငံရေးလောကကိုစတင်ခဲ့သည်။ A … စာဖတ်ခြင်း Continue နိုင်ငံရေးမှာအလှဆုံးအမျိုးသမီး ၁၅ ယောက်
[ad_1] NSA ၏သာယာသောလမ်းကြောင်းသည်အခြားသူများအားလျစ်လျူရှုလိမ့်မည်မဟုတ်သလိုသင့်ကိုသင်ယုံကြည်မှုရှိစေသည်။ eau de Toilette ကိုသုံးတဲ့အခါအနံ့တစ်ခုရဲ့အသံနဲ့ကြာချိန်ကိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံကအတူတကွတွဲပြီးမှတ်ထားရမယ်။ အဓိကတစ်ခုမှာရေမွှေးကိုခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အဝတ်အစားများအတွက်မှန်ကန်သောအသုံးချမှုဖြစ်သည်။ BeautyHack သည်မည်သို့အကြောင်း ... စာဖတ်ခြင်း Continue ရေမွှေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဘယ်လိုသုံးမလဲ။
သင်သုံးနေတဲ့မိတ်ကပ်ပစ္စည်း ၅ မျိုးဟာမှားပါတယ်
[ad_1] TOSenia Wagner သည်အလှအပဆိုင်ရာယုတ္တိဗေဒအတွက်စာမေးပွဲတစ်ခုဖြေဆိုနေပါသည်။ ပြန်လည်ရယူရန်အလွန်ကောင်းသောကျောင်းသားများ၊ ငါးနှစ်ကျရှုံးသောကျောင်းသားများ။ ၁) BB cream You: အရောင်ကိုအောက်ခံကဲ့သို့လိမ်းပါ။ တကယ်တော့ဒါကရာဇ ၀ တ်မှုမဟုတ်ဘူး၊ Raskolnikov ကဲ့သို့အပြစ်ပေးခံရမှာမဟုတ်ဘူး။ အခြေအနေတစ်ခုတွင်အခြေခံသည်ပုံမှန်ဖြစ်လျှင် ... စာဖတ်ခြင်း Continue သင်သုံးနေတဲ့မိတ်ကပ်ပစ္စည်း ၅ မျိုးဟာမှားပါတယ်
[ad_1] ဓာတ်မတည့်မှု၊ အိမ်သုံးဓာတုပစ္စည်းများနှင့်လက်သည်းများကိုအဘယ်ကြောင့်သန့်ရှင်းစေသနည်း။ ဗီတာမင်ဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းလက်သည်းကွဲခြင်း၏အကြောင်းရင်းများသည်အတွင်းရောအပြင်ပါဖြစ်နိုင်သည်။ စွန်ပလွံပင်သည်ဗီတာမင်နှင့် microelement များချို့တဲ့သည်။ ကယ်လ်စီယမ်၊ ဗီတာမင် D၊ ဖော့စဖရပ်၊ ဆီလီကွန်၊ သံ။ သူတို့၏ချို့တဲ့မှုကြောင့်လက်သည်းများသာမကဆံပင်နှင့်အရေပြားများပါထိခိုက်သည်။ တွင်… စာဖတ်ခြင်း Continue မင်းမသိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရင်းတွေ
ဆံကေသာအတွက် Peppermint မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ: တကယ်အလုပ်ဖြစ်လား။
[ad_1] TOOLumnistist BeautyHack, သဘာဝအလှကုန်အမှတ်တံဆိပ် (@ natureal.ua) ကိုတည်ထောင်သူ Vita Liasota ကဆံပင်အလှကုန်တွေမှာ peppermint မရှိမဖြစ်အဆီကိုဘာကြောင့်ထည့်သွင်းခဲ့တာလဲ၊ ခါးကိုကျစ်ဆံမြီးကြီးထွားအောင်တကယ်အထောက်အကူဖြစ်စေသလားပြောခဲ့သည်။ “ အလှကုန်ထုတ်လုပ်ရာမှာ peppermint မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီကိုသုံးလေ့ရှိတယ်။ ဒါဟာ… စာဖတ်ခြင်း Continue ဆံကေသာအတွက် Peppermint မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ: တကယ်အလုပ်ဖြစ်လား။
၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ထိပ်တန်းအချစ်ဇာတ်ကား ၅ ကား
[ad_1] NSA အလုပ်ပင်ပန်းသောနေ့ပြီးနောက် melodrama ကိုအပန်းဖြေရန် (သို့) အချစ်အကြောင်းရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏စိတ်ခံစားမှုများကိုထုတ်ပစ်လိုသလား။ ၂၀၁၉ ရဲ့အကောင်းဆုံးဝတ္ထုသစ်များပါ ၀ င်တဲ့ငါတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့မင်းကိုယ်မင်းရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အစမှ စ၍ ရုပ်ရှင်သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော Jennifer Lopez ကိုသရုပ်ဆောင်သည် (ဖတ်ပါ။ စာဖတ်ခြင်း Continue ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ထိပ်တန်းအချစ်ဇာတ်ကား ၅ ကား
ဆံပင်ရှည်အတွက်စတိုင်ကျသောဆံပင်ပုံစံ ၁၈ မျိုး
[ad_1] VVictorian စိတ်ရင်း၊ Gothic အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရွေးချယ်မှုတွင်ပြီးပြည့်စုံသောလွတ်လပ်မှု။ ရှုပ်ထွေးသောအစုအဝေးများဆံပင်ရှည်သို့ဘာသာပြန်ရန်အလွယ်ကူဆုံးဤ Victorian အချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောအသုံးအဆောင်များနှင့်သင်ဝတ်စားဆင်ယင်မှု code များ (သို့) ကိုယ်ပိုင် ဦး စားပေးမှုများကြောင့်လမ်းမလျှောက်လျှင်သင်မမြင်နိုင်သောသို့မဟုတ် elastic band များသို့သင့်ကိုယ်သင်ကန့်သတ်နိုင်သည်။ စာဖတ်ခြင်း Continue ဆံပင်ရှည်အတွက်စတိုင်ကျသောဆံပင်ပုံစံ ၁၈ မျိုး
စာမျက်နှာ 1 ... စာမျက်နှာ 44 အဟောင်းတွေ ရေးသားချက်များ